Maninona ny GDPR no tsara amin'ny doka nomerika | Martech Zone
Mandat amin'ny lalàna malalaka antsoina hoe General Data Protection Regulation, na ny GDPR, nanomboka ny 25 mey lasa teo. Ny fe-potoana dia nahitana mpihetsiketsika dokam-barotra nomerika maro niady varotra ary maro hafa no natahotra. Ny GDPR dia handoa tolotra iray ary hitondra fanovana izany, saingy ny fanovana dia tokony horaisin'ireo mpivarotra dizitaly fa tsy tahotra. Izao no antony:
Ny modely faran'ny pixel / cookie dia tsara ho an'ny indostria
Ny zava-misy dia ela loatra io. Nisintona ny tongotr'izy ireo ny orinasa, ary tsy mahagaga raha ny EU no mitarika an'io fiampangana io. Ity no fiandohan'ny farany ho an'ny modely miorina amin'ny pixel / cookie. Tapitra ny vanim-potoanan'ny halatra angon-drakitra sy ny fanafoanana data. Ny GDPR dia handrisika ny dokam-barotra an-tariby mba hifidy sy hifototra amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ary hametraka paikady miely toy ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanamarihana momba ny dokam-barotra tsy dia manintona sy manelingelina. Ireo fanovana ireo dia hampiditra ny vanim-potoana manaraka amin'ny fanaovana dokambarotra nomerika: varotra olona, ​​na izay mampiasa angona avy amin'ny antoko voalohany fa tsy angona / ad-fanompoana an'ny antoko fahatelo.
Hihena ny fampiharana indostrialy ratsy
Ireo orinasa miantehitra tanteraka amin'ny maodely kendrena amin'ny fitondran-tena sy mety hahitana vokany betsaka. Tsy midika akory izany fa hanjavona tanteraka ireo fomba fanao ireo, indrindra satria ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny firenena ivelan'ny EU, fa ny tontolon'ny nomerika dia hivoatra mankany amin'ny angon-drakitra sy dokam-barotra amin'ny lafiny voalohany. Hanomboka hahita firenena hafa hampihatra fitsipika mitovy amin'izany ianao. Na ireo orinasa miasa any amin'ny firenena izay tsy latsaka ara-teknika eo ambanin'ny GDPR aza dia hahatakatra ny zava-misy eo amin'ny tsena manerantany ary hihetsika amin'ny torolàlana entin'ny rivotra.
Manadio ny data maharitra ela
Ity dia tsara amin'ny doka sy marketing amin'ny ankapobeny. Ny GDPR dia efa nanosika orinasa sasany any Angletera hanao fanadiovana data, ohatra, manala ny lisitr'ireo mailaka hatramin'ny roa ampahatelony. Ny sasany amin'ireto orinasa ireto dia mahita ny tahan'ny fisokafana sy ny tsindry avo kokoa noho ny angona izay ananany ankehitriny dia manana kalitao tsara kokoa. Ity dia anecdotal, azo antoka, fa lozika ny tetik'asa raha toa ka ambony ny tabilao ny fomba fanangonana angon-drakitra ary raha misafidy an-tsitrapo sy mahalala an-tsitrapo ny mpanjifa dia ho hitanao ny taha ambony kokoa amin'ny fifamatorana.
Tsara ho an'ny OTT
OTT midika ny-ny-tampon'ny, ny teny ampiasaina amin'ny fandefasana atiny amin'ny horonan-tsary sy fahitalavitra amin'ny alàlan'ny Internet, tsy mila ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny serivisy TV na tamban-karama mahazatra.
Noho ny maha izy azy, ny OTT dia voaro amin'ny fiatraikany GDPR. Raha tsy nisafidy ianao dia tsy kendrena, raha tsy hoe, ohatra, kendrenao ho jamba amin'ny Youtube ianao. Amin'ny ankapobeny, OTT dia mifanaraka tsara amin'ity tontolo nomerika mivoatra ity.
Tsara ho an'ny mpanonta
Mety ho sarotra amin'ny fotoana fohy, fa hahasoa ho an'ny mpanonta ao anatin'ny fotoana maharitra, tsy mitovy amin'ny zavatra atomboka ho hitantsika amin'ireo orinasa mitantana ny tahiry mailaka ataon'izy ireo. Ireo fanadiovana an-keriny an-keriny ireo dia mety ho mikorontana amin'ny voalohany, araka ny voalaza tetsy ambony, fa ireo orinasa manara-dia an'i GDPR koa dia mahita mpamandrika misimisy kokoa
Toy izany koa, ny mpampanonta dia hahita mpanjifa mirotsaka bebe kokoa amin'ny atiny miaraka amina paikadim-panafarana mifidy henjana kokoa. Ny tena izy dia tsy nety nanao sonia sy nisoratra anarana nandritra ny fotoana ela ny mpanonta. Ny toetoetran'ny torolàlana GDPR dia tsara ho an'ny mpanonta satria mila ny angon-drakitry ny antoko voalohany izy ireo mba hisy vokany.
Attribution / fandraisana anjara
Ny GDPR dia manery ny indostria hieritreritra mafy momba ny fomba hanatonana ny fanondroana, izay nopetahany maso nandritra ny fotoana elaela. Ho sarotra kokoa amin'ny spam ny mpanjifa, ary hanery ny indostria hamoaka atiny manokana tadiavin'ny mpanjifa. Ny torolàlana vaovao dia mitaky ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa. Mety ho sarotra kokoa ny manatratra izany, saingy ho avo lenta kokoa ny vokany.
Tags: hanambaraatrributionmofomamyCookieslasantsy dataHafanàm-po an dokam-barotragdprottny-ny-tampon'nyPixelampypixel fanarahana
Larry Harris no CEO an'ny Sightly, sehatra fanaovana dokambarotra an-tsary fampisehoana izay mampiasa tanjona kendrena ho an'ny olona hampifanaraka ny mpijery amin'ny doka video manokana mifandraika amin'izany.